बुंडर झरना, जसले लोभ्याउँदैछ आन्तरिक पर्यटकको मन - ParyatanBazar.com
भरत बिक्रम शाह १५ श्रावण २०७८, शुक्रबार मा प्रकाशित
साउन १५ डोटी। सुन्दर छ सुदूरपश्चिम ! ताल तलैया , खोला , झरना , ठुला पहाड , समतल फाँट , सुदूर भाषा र यहाँको जीवनशैली सबैको आ आफ्नै महत्त्व छन्। तर यीनको महत्त्व नबुझ्दा अझै पनि सुदूर डाँडा मुनिको घाम बन्न बाध्य छ ।
अब भने समय आइसकेको छ सुदूर लाई समृद्ध सुदूर बनाउने र विश्वमा सुदूरलाई चिनाउने। सोही क्रममा आज हामीले सुदूरको डोटी जिल्लामा अवस्थित एक चर्चित झरना लाई उजागर गर्दै छौँ। डोटी स्थित जोरायल गाउँपालिका २ मा पर्दछ बुंडर झरना , जहाँ झुम्न र आफ्नो जीवनको नयाँ तथा ताजा याद बनाउन दिनहुँ रूपमा हजारौँ युवाहरू पुग्ने गर्दछन्।
आजकाल सुदूर पश्चिमकै भाइरल झरनामा गनिन थालेको छ बुंडर झरना ! गर्मी मौसम अनि झरना , यी दुइको इच्छा र आवश्यकताको संयोजन नै उत्कृष्ट हुने गर्दछ। त्यसैले त दिन प्रतिदिन पहाड र चट्टानमा ठोक्किँदै हतासिएर झर्ने झरनाको ठन्डापन जोकोहीको सपना बन्ने गरेको छ।
धनगढी बजारबाट ३ घण्टाको दुरीमा पुग्न सकिन्छ भने बुंडर बजारबाट ७ कि मि ओरालो बाटो पार गरेर झरना मै गाडी सहित पुग्न सकिन्छ।
यो झरनामा नुहाएर आनन्द लिए सँगै यही झरना सङ्गै बाटोमा पर्छन् छतिवन ताल। छतिवन ताल एक सुन्दर अनि पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ताल हो । केही दिन यता छतिवन तालमा बोटिङ्गको पनि व्यवस्था गरिएको छ।उच्च ठाउँमा रहेको उक्त तालमा कहाँबाट पानी आउँछ र कहाँ जान्छ भन्ने अहिलेसम्म कसैलाई जानकारी नभएको स्थानीयवासी बताउँछन्।स्थानीय बुढा पाकाका अनुसार यो ताल भएको क्षेत्रमा पहिले खेतीयोग्य जमिन थियो ।
तालको सिरानीमा एउटा न्वालो रहेको थियो जो अहिले पनि देख्न सकिन्छ । त्यस न्वालोको नाम पुतली न्वालो हो । न्वालोकै पानीबाट खेतमा रोपाई हुने ग¥र्थाे । किम्बदन्ती अनुसार एक महिलाले सपना देखे अनुसार त्यहाँ रोपाई नगर्न भनिएकोमा घरका मान्छेले नमान्दा रोपाई भएकै वेला त्यहाँ रहेका रोपारको मृत्यु भएको स्थानीयहरुको भनाई छ ।
छतिवन तालको घुमफिरपश्चात् तालसँगै रहेको घाँसे मैदान यहाँको प्रमुख आकर्षण हो। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो पटक रुबसकाँडाबाट नियमित रूपमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनमा आएको छ ।
छतिवन पर्यटन प्रवर्द्धन संरक्षण समिति र बैतडी अमेजिङ एडभेन्चर प्रालिको संयुक्त सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङको शुरुवात गरिएको हो । जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन भएको यो पहिलो पटक हो । गएको वर्ष उक्त गाउँपालिकामा प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान गरिएको थियो ।
कम्तीमा पनि १५ देखि २० मिनेटसम्मको उक्त प्याराग्लाइडिङ यात्रा शुरु भएपछि अहिले त्यहाँ आन्तरिक तथा जिल्ला बाहिरका पर्यटक तथा प्याराग्लाइडिङ गर्नेको भीड बढ्न थालेको छ , हाल भने कोरोना का कारण प्याराग्लाइडिङ बन्द रहेको छ ।
यी स्थानहरूको प्रचारप्रसार गर्न सके डोटीले लाखौँ पर्यटक आफ्नो जिल्लामा भित्र्याउन सक्ने तर त्यसको लागी स्थानीय र प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको स्थानीय बत्ताउँछन्।
भरत बिक्रम शाह पर्यटन बजारका प्रदेश नम्बर सातका संवाददाता हुन्।